Baqattonni garagaraa walitti dhufan 189 Magaalaa Iskandariyyaa Dammee Polisii Aamiriyaa ja,amtuu keysatti hidhaa jiraachuun isaanii bekkamee jira – Welcome to bilisummaa
Baqattonni garagaraa walitti dhufan 189 Magaalaa Iskandariyyaa Dammee Polisii Aamiriyaa ja,amtuu keysatti hidhaa jiraachuun isaanii bekkamee jira
bilisummaa September 11, 2014	1 Comment
:Gabaasa dhaabbanni mirga dhala namaa masrii baaserraa akka hubachuun dandeyametti , warreen qabamanii Polisii harkatti hidhaa jiran hundi isaanii Baqattummaan dhaabbata UN .
Cairo jalatti galmaawanii kan jiran tahuu addeyseeti jira. Baqattota kanneen keysatti warreen akka Suriyaa Sodaan Jibuutii Juzur alqamar faan keysatti kan argaman hoggaa tahuu garri isaan ittii sossohaa jiran waan Hin bekkaminiif Dhaabata UN kan dubbisuu barbaadan tahuus dhaabbichi mirga dhala namaa masrii kuni dabalee addeysee jira.
Yoo UN irraa debisaa dhaban ammoo gara Biyya isaanitti ka ergaman tahuus dabaluun addeysee jira . Tanaafu Baqattota Oromo Cairo hundaaf lafa fagoo akkasiirraa akka of Egan dhaamuufii barbaanneeti .
Previous MURANNOON HAA KAANU!
Next Seenaa Gabaabaa Aadde Faaxumaa Galmoo (Haadha Abdii) 1930-2014
Warri bilisummaa .com heddu galatomaa jechuu barbaanna